नेपालको एयरपोर्टका बारेमा संसार भर चर्चा हुने गरेको छ। त्यो चर्चा राम्रो होईन नराम्रोको विषयमा चर्चा हुनेको छ। विश्वकै झुरस्ट एयरपोर्टको ३ नम्वरमा रहन सफल भित्रुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा किन
कर्मचारी हुनु त खड्काजी जस्तो
नेपाल आयाल निगमलाई ‘घायल निगम’ बनाउनेहरूको सूची निकै लामो छ। हरेक वर्ष सूची थपिदै जान्छ। सर्वसम्मत् रूपमा त्यस्तो सूचीको अग्रपङ्तीमा पर्ने खड्का थरका निगमका कार्यकारी निर्देशकले बिहीबार राजीनामा ठोकेछन्। कार्य
गर इन्द्रसँग सम्झौता
जुन ५ अर्थात् विश्व वातावरण दिवस विगतका वर्षहरूझैं यसपटक पनि धुमधाम भयो । वृक्षरोपण, ¥याली, टोल बस्ती सरसफाइजस्ता कार्यक्रमले यस वर्ष पनि राम्रै निरन्तरता पायो । काठमाडौं उपत्यका मात्रै होइन,
पहिला देश अनि विदेश
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, सांसद, मन्त्री र उपल्लो तहमा पुग्नेहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक ग¥या खबर बेला मौकामा सुन्न
प्रस्तावित नयाँ मन्त्रालय
वर्तमान सरकारले छिट्टै छलाङ मार्लाजस्तो बलियो संकेत देखिन थाल्या छ है। मन्त्रीहरू अनुगमन र निरीक्षणका मामलमा एकसे एक छन्। गृहमन्त्री थापालाई कारागार र प्रहरी विटको अनुगमनले मात्रै चित्त बुझेनछ क्यार
वर्तमान सरकार गठन भएपछि निकै चुरीफुरी देखाएका यादवथरका एक मन्त्री खै कुन्नी हिजोआज गुपचुप छन्। गतिलो मन्त्रालय पाएपछि केही दिन उनी बजार अनुगमनमा पनि देखिए। उनी सक्रिय बनेपछि धेरै व्यापारीको
‘जम्बो’ पनि कस्तो खल्लो !
तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनताका धेरै प्रतिबद्धता जनाएको जगजायर छ, प्रष्ट्¥याइरहनुपर्दैन होला। तर केही स्मरण गर्न मन लाग्यो। ‘आफ्नो सरकारले यसो गर्छ, उसो गर्छ, धेरै गर्छ, फलानाको जस्तो विकृति कुनै
प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ सबैको उत्तर आउने गर्छ जनताको पिरमर्का बुझ्ने र विकासप्रेमी। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री कस्ता छन्। सबैले राम्रोसँग बुझेका व्यक्ति देशका प्रधानमन्त्री छन्। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई कहिले के कहिले केको
नेपालका पार्टीका नाम अनेकथरी छन्। हेर्दा, सुन्दा, पढ्दा आश्चर्य लाग्छ। ठूलै तामझाम र तयारीका साथ २ साता अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा भयो। बुधबार साँझसम्म सो पार्टीको नाममुनि ‘अन्डरलाइन’ राखिएको
आयोग कहिले ?
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । बेरोजगार युवाका लागि पक्कै उत्साहपूर्ण खबर हो यो । तर कुन तह
झुक्किएर पनि भोट हालिन्न
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६को बजेट सार्वजनिक गरे। सप्ताह भन्न व्यासासनमा बसेका पण्डितको भन्दा उनको वाचन कमजोर भएन। खरर्र.. खरायो दौडेझैं एक घण्टा १० मिनेटभित्रैमा उनले बजेटको साङ्गे
‘डल्ला’ अथवा ‘डल्लो’ यस शब्दलाई जसले जसरी बुझ्छन् त्यसरी परिभाषित गरे हुन्छ । कसैका लागि माटोको डल्लो, कसैका लागि सक्खरको डल्लो, कसैका लागि सुनको, कसैका लागि भकुण्डो (फूटबल) अनि कसैका
वर्तमान सरकार विगतको जस्तो अस्थिर सरकार होइन रे, छिट्टै ठूलो छलाङ मार्छ रे। त्यही भएर आम नेपालीलाई खुसी बनाउन ‘खुसी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा अघि सार्या छ। त्यो लक्ष्यमा पुग्न
‘डल्ला’ अथवा ‘डल्लो’ यस शब्दलाई जसले जसरी बुझ्छन् त्यसरी परिभाषित गरे हुन्छ। कसैका लागि माटोको डल्लो, कसैका लागि सक्खरको डल्लो, कसैका लागि सुनको, कसैका लागि भकुण्डो (फुटबल) अनि कसैका लागि
गफ धेरै भो सम्धी
गफ गर्नका लागि पैसा पर्दैैन। पैसा नलाग्ने गफ जति गरे पनि भो। नारा र भाषणले नै देश उहिल्यै समृद्ध र विकसित भइसकेको हो। तर व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा भने देशले
फेरी कुरो मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणको । यो विषयमा जति चर्चा गरेपनि नसकिने । वर्तमान मन्त्री परिषद्का सबै सदस्य वामपन्थी छन् । कम्युनिजम स्कूलिङबाट दिक्षित भएका कम्रेड मन्त्रीहरु विपन्न र सर्वहाराको
प्रधानमन्त्रीसहित धेरै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति बिवरण सार्वजनिक भएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएको १ सय दिन नपुग्दै विवरण सार्वजनिक भयो, यो पनि सरकारको उपलब्धी नै होला। सार्वजनिक विवरण नियाल्दा धेरै मन्त्रीहरू
गाउँघरमा गुपचुपका साथ ‘गोहोरो’ पक्रिइन्छ अनि मिसन पुरा हुन्छ। यता सहरमा सुनकाण्डसँग जोडिएका ‘गोरे’ नाम गरेका व्यक्ति पक्रिँदा चर्चा व्यापक छ। तर मिसन पूरा हुनेमा आशंका छ, मिसन तुहिन वेर
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार सोमबार अपरा≈न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। सत्तापक्षले कार्यक्रम गज्जब भएको, मुलुकमा आर्थिक छलाङ मार्न योग्य भएको, विगतमा वाचा र प्रतिबद्धता गरिएअनुसारकै भएको दाबी ग¥या
काठमाडौं भन्नेबित्तिकै मुलुकको राजधानी, सुविधा सम्पन्न ठाउँ भन्ने परिकल्पना गरिन्छ। तर उपत्यकाबासी काठमाडौंलाई फरक रूपमा बुझ्छन्, धेरैको मानसपटलमा धुवाँ, धुलो, हिलो, मैलो, अस्तव्यस्त र अनगिन्ती समस्या चित्रण हुन्छ। यथार्थमा पनि